कुलमानको कार्यकाल थप्नेबारे निर्णय भएकाे छैन, यसरी फैलियो हल्ला ! - Naulo Samachar
कुलमानको कार्यकाल थप्नेबारे निर्णय भएकाे छैन, यसरी फैलियो हल्ला !
२०७७ भाद्र ९, मंगलबार मा प्रकाशित ३४७ पटक पढिएको
भदौ ९, काठमाडाैँ। मङ्गलबार बेलुका पाँच बजेपछि सामाजिक सञ्जालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल थप भएको बारे निकै हल्ला भयो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमान घिसिङको कार्यकाल चार वर्ष थपेको भन्दै ट्विटर र फेसबुकमा बधाई दिनेको ओइराे लाग्यो । प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले पनि कुलमानलाई बधाई दिइरहेका थिए । केही सञ्चारमाध्यमले पनि घिसिङको कार्यकाल थप भनेर समाचार लेखे ।
यसरी फैलियो हल्ला !
दीपकराजको यो स्टाटस फैलिन समय लागेन । फेसबुकदेखि ट्विटरसम्म उनकै स्टाटस शेयर र स्क्रिनशर्टसहित फैलाउने काम भयो । दीपकराजकै स्टाटसलाई आधार मानेर सामाजिक सञ्जालमा कुलमानको नियुक्ति दोहोरिएको विषय भाइरल भयो । उनको स्टाटसमा १२ हजारभन्दा धेरैले लाइक गरेका छन्, ११ सय जनाको कमेन्ट रहेको छ भने ५९६ पटक शेयर गरिएको छ। स्टाटस भाइरल भएपछि दिपकराज गिरीले अाफ्ना फलाेअर्सलाई कुलमान घिसिङ बारेेेमा कुुुनै निर्णय नभएकाे तर कुुुुल मानकाे कार्यकाल थपिएको सबै नेपालीले हेेेेर्न चाहेेेेकाे लेखेका छन् ।